Sun, Aug 19, 2018 | 07:19:34 NST
आज हात धुने दिवस
काठमाडौं, असोज २८ — 'हात धोऔँ रोगबाट बचौँ ' भन्ने नाराका साथ शनिबार (आज) विश्वभरी नै हात धुने दिवस मनाइँदैछ । विभिन्न खालका सरुवा रोगबाट बच्नको लागि साबुनपानीले हात धुने बानीको विकास गर्न सन् २००८ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १५ मा यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।
झाडापखलाबाट मोरङ्गमा एक जनाको ज्यान गयो, ६ जना सिकिस्त
मोरङ, असोज २२ — मोरङ्ग जिल्लाको दुलारी स्थित बाँसबारीमा झाडापखलाबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । बस्तीमा फैलिएको झाडापखालाबाट आइतबार सोमराज राईको ज्यान गएको हो ।
कालिकोटमा झाडा पखलाबाट ३ सय भन्दा बढी बिरामी
कालिकोटको सदरमुकाम मान्ममा झाडापखालाबाट बिरामी पर्नेको संख्या तीन सय नाघेको छ । मान्मा गाविसको वडा नं. १ र २ मा पर्ने दलितटोलका स्थानीय बासिन्दा राँगाको मासु खाएपछि ३ सय ३१ जना विरामी परेको जिल्ला अस्पताल कालिकोटले जनाएको छ । बिरामीको संख्या हृवात्तै बढेपछि स्थानीय भवानी प्राथमिक विद्यालयमा राखेर उपचार भैरहेको कालिकोटबाट पत्रकार मनीराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन ।
कालिकोटको मान्ममा झाडापखालाबाट १२ जना बिरामी
कालिकोटको सदरमुकाम मान्ममा झाडापखालाबाट १२ जना बिरामी भएका छन । मान्मा गाविसको वडा नं. १ र २ मा पर्ने दलितटोलका स्थानीय बासिन्दा राँगाको मासु खाएपछि झाडापखालाबाट प्रभावित भएका हुन् । बिरामी मध्ये पाँचजनाको जिल्ला अस्पताल, कालिकोटमा उपचार भइरहेको छ भने सातजनाको गाउँमै उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौं,असोज १२ — आज विश्व मुटु दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाईंदैछ । यसवर्षको विश्व मुटु दिवसको नारा ‘एक विश्व, एक घर, एक मुटु’ तय गरिएको छ ।
जाजरकोटका ५ वटा औषधी पसल बन्द
राजेन्द्र कार्की/ उज्यालो,जाजरकोट, असोज ९- जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा आवश्यक प्रक्रिया नै नपुर्याई औषधी पसलहरु सञ्चालन भएको भेटिएपछि पाँच ओटा औषधी पसल बन्द गरिएको छ ।
धादिङका सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द
धादिङ, असोज ८ — अस्पताल तोडफोडको बिरोधमा धादिङ जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सामुहिक रुपमा अस्पताल छोडे लगत्तै चार ओटा स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठनले पनि सबै स्वास्थ्यसंस्था बन्द गरेका हुन् ।
लपरबाहीले सुत्केरीको ज्यान गएको भन्दै अस्पताल तोडफोड
धदिङ, असोज ७ — सुत्केरी गराउन जिल्ला अस्पताल पुगेकी एक युवतीको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयवासीले धादिङ जिल्ला अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन । धादिङ्ग साङकोष गाविसकी २३ बर्षिया भगवती श्रेष्ठको सुत्केरी गराउन शुक्रवार बेलुकी जिल्ला अस्पतालमा अप्रेशन गराईएको थियो ।
विश्व मुटु दिवसको साप्ताहिक कार्यक्रम आजदेखि
काठमाडौं, असोज ७ — विश्व मुटु दिवसको साप्ताहिक कार्यक्रम शनिवारदेखि शुरु भएको छ । यसवर्षको विश्व मुटु दिवसको नारा ‘एक विश्व एक घर एक मुटु’ तय गरिएको छ ।
अस्पतालमा मर्करी उपकरण प्रयोगमा रोक
काठमाडौं, असोज ६ — धरान स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानमा मर्करीबाट प्रयोग भएका उपकरण प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । मर्करी अर्थात पारो नामको धातु प्रयोग गरेर बनाइएका उपकरणबाट मानब स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको भन्दै बन्देज लगाइएको हो ।
रेविज सप्ताह सुरु ।
काठमाण्डौं असोज ५ । विश्व रेबिज दिवसका सन्दर्भमा रोग विरुद्ध जनचेतनाका लागि बिहीवारदेखि रेबिज सप्ताह शुरु भएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले हप्ताभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैछ । विश्व रेबिज बिरुद्धको दिवस आउँदो असोज ११ गते रेबिजलाई ईतिहासमा सिमित गर्न सबै मिलि काम गरौं नाराका साथ मनाईंदैछ । असोज ५ गतेदेखि असोज ११ गते सम्म विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा रेबिजको खतरा र यसबाट जोगिने उपायका बारेमा पर्चा पम्प्लेटिङ्ग प्रशिक्षण प्रतियोगितात्मक कार्य...
जाजरकोटमा १९ प्रतिशतलाई मात्र सुरक्षित प्रसुति सेवा !
राजेन्द्र कार्की/ उज्यालो, जाजरकोट, असोज ४— मध्य पश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा १९ प्रतिशत गर्भवति महिलाले मात्र दक्ष प्रसुति सेवा पाउने गरेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्याकंले १९.४६ प्रतिशत गर्भवति महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा प्रसुति गराउने गरेको र १७.४१ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसुति गराउने गरेको देखाएको छ ।
वीर अस्पतालको क्यान्टिनले विरामीको जाऊलोमा चिया मिसायो
काठमाडौं, असोज ३ — नेपालकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको चमेनागृहमा बिरामीलाई दिइने जाउलोमा चिया मिसाउने गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य विभागको टोलीले मंगलवार गरेको अनुगमनमा भान्सामा भाडा माझेको पानी व्यवस्थापन नभएको तथा भान्साकोठा र सौचालय नजिकै भएको पाइएको छ । चमेना गृह अत्यन्तै फोहोर भेटिएपछि तीन दिन भित्रमा लिखीत स्पष्टिकरण दिने गरी चिट काटिएको वाणिज्य विभाग अधिकृत कमल थापाले वताउनुभयो । विभागले सिलबन्दी नै गर्ने भनेपनि विरामीलाई गार्हो हुने भन्दै अस्पताल व्यवस्थापपन पक्षको आग्रह...
विकाशशील देश बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन असफल
असोज ३ (एजेन्सी) — विश्वका अधिकांश विकाशशील देशले बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने सम्बन्धि सहश्राब्दी विकाश लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखिएको छ । बेलायतका शोधकर्ताहरुले गरेको पछिल्लो अध्ययनले विश्वका केबल ७ प्रतिशत विकाशशील देशले मात्र गर्भवती महिला र नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउने सहश्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने देखाएको हो ।
सेनाको प्रस्तावित मेडिकल र नर्सिङ कलेज संचालनका लागि अध्ययन शुरु
नेपाली सेनाको प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान अर्न्तर्गत मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेज संचालनका लागि अध्ययन शुरु भएको छ । डाक्टर अरुण सायमीे नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोलीले भण्डारखालमा नयाँ निर्माणाधिन मेडिकल कलेज र छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र अस्पतालको निरीक्षण गरेको छ ।